U-Kate Hudson unesitayela esingenakuqhathaniswa, uphumelele futhi uyazi ukuthi uyabaluleka, njengentombazane eyayizalelwe umbhangqwana wezinkanyezi - umlingisi uGoldie Hawn nomculi uBill Hudson.
I-Kate's veins ine-cocktail yokugaya i-Italian, isiNgisi kanye negazi le-Jewish eliphazamisa ngokucacile umlingiswa wentombazane, okwenza ibe nomoya othukuthele, ophikelela futhi ngesikhathi esifanayo. Kusukela esemncane, u-Hudson uye wajwayela ukunakekelwa okuqhubekayo komshini, oboshwe emndenini wakhe, ngoba namuhla uzinikeza izingxoxo ngokuzithandela, etshela izintatheli ngezinye izikhathi ukuguquka kanzima empilweni yakhe. Kubonakala sengathi uKhad Hudson akanalo lutho lokufihla. Ingabe kunjalo?
Ubuntwana bukaKate "obuncane" bekungabonakali njengoba kungabonakala ekuqaleni: abazali bakhe bahlukanisa lapho intombazane yayinonyaka kanye nengxenye kuphela. Ubaba wayengenandaba nendodakazi yakhe, uKurt Russell wayehileleke kakhulu ekufundiseni intombazane. (Kusukela ngo-1983, uKurt nomama Kate, Goldie Hawn, bahlala ndawonye).
Ngo-1997, le ntombazane yaqeda isikole yaqala ukusebenza. Emkhakheni we-actor, walindele ukukhuphuka ngokushesha futhi manje ngo-2000, uKate wathola isikhundla sakhe sokuqala soku-Oscar - ngendima yakhe efilimu ethi "Almost Famous."
UK Kate ufuna ukudlala usuku olulodwa nonina, kodwa uGoldie Hawn akanalo isifiso esithile sokususwa. Nakuba Kate engalahlekelwa ithemba lokuthola ifilimu efanelekayo kanye, lapho kuzoba khona izindima zombili.
Kusukela eneminyaka emihlanu uKate uthanda ukudansa, enye yezindlela zakhe zokudansa ezithandwayo yizigqila. Intombazane icabanga ukuthi ukudansa ngesibalo kuyindlela enhle yokugcina kufanelekile, ngoba imithwalo enjalo iqinisa imisipha yesisu nesisu.
Lapho uKatlant ehlongozwa ukuthi yingxenye yomculo othi "Nine" wavuma ngaphandle kokungabaza, ngoba lena yithuba lakhe lokuqala lokubonisa hhayi umdlalo owenza kahle kakhulu, kodwa namakhono omdanso omuhle. Ukulungele ukudubula, umdlali wezobucayi waqala ukuthatha izifundo ze-salsa, okwaba ngokushesha ukuzijabulisa kwakhe okusha. "I-salsa ingumdanso onamandla kakhulu, kodwa ujabule kakhulu!" Uhleka Kate.
UKat washada nomngani uChris Robinson, owavela kuye indodana yakhe uRyder. Kuxoxisana ngalunye, uKat uqinisekisa ukuthi uChris uyindoda enhle futhi uyamthanda kakhulu kangangokuthi wayethandana nomshado wakhe futhi wayethanda ukushada, ngoba abalandeli abaningi be-actress baqiniseka ukuthi isikhathi sizofika futhi lo mbhangqwana uzonikeza ubuhlobo bawo ithuba lokubili. Kungakhathaliseki ukuthi lena indlela yokubonisa isikhathi. UKate ngokwakhe uthi umshado wabo awuzange usebenze ngoba lo mbhangqwana awutholanga incazelo yegolide phakathi kokoma adventure nokuzinza okulinganiselwe kwempilo yomndeni. Manje uKate noChris bafundisa uRyder, obizwa nguHudson ngokuthi "umuntu oyinhloko empilweni yakhe." Mayelana ne-Kid Ryder ingakhuluma ngamahora! Izingxoxo ezingavamile nomdlali we-actress ngaphandle kokukhuluma ngendodana yakhe. Kate ukholelwa ukuthi ukuba umama ongashadile akuyona into embi futhi akukhathazi nhlobo.
Emphepheni obomvu Kate ubheka nje emangalisa, kodwa empilweni yansuku zonke, usondelene kakhulu nesitayela se-hippies. UKate uhlela ngisho nokukhulula izembatho zakhe, ethembisa ukuthi izingubo zakhe zizoba mnandi, zihle futhi zikhululekile ekugqoka kwansuku zonke.
Bonke ababenenhlanhla yokwazi uKay Hudson, bagubha ukujabula kwakhe okungapheli, ithemba nokuqina komlingiswa. Esikhathini ngasinye, uK Kate kalula uba yisikhungo sokunaka, kusukela kumdlali oqhakazile, obuso bakhe obungahle bungabikho ukumomotheka nobungane, okungenakwenzeka ukukhipha.
Yilokho, Kate Hudson. Ekhanyayo, evulekile, encane futhi edumile. Umlingisi ohamba ngokuphila kalula, engalokothi alahlekelwe ithemba. Ngempela, uKhad Hudson akanalo lutho lokufihla. Ngenxa yalokhu siyayithanda.
U-Olga Buzova uzovula futhi avalile "i-New Wave", ividiyo
Olunye usizi lwe-"House-2": U-Olga Motsak ubelokhu efuna umyeni olahlekile iminyaka emihlanu
U-Elena Proklova ushaqeka ngokuvuma ngeveli no-Oleg Yankovsky
Isaladi "Olivier": iresiphi yendabuko nge-sausage, i-classic nekhukhu kanye nekhukhamba eqoshiwe. Izindlela zokupheka ezithokozisa kakhulu ngesithombe sesaladi yasebusika "Olivier" woNyaka Omusha 2017
Ukudla kokudla kwesisindo: ukudla kwekhofi
Ukuhlangana koNyaka Omusha 2013